စနေလင်း| January 23, 2013 | Hits:1,212
swe htwe January 23, 2013 - 1:52 pm I feel very sad. Please cease fire. !!
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 24, 2013 - 3:47 am သည် စစ်ပွဲနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ မိသားစုတွေ ဒုက္ခရောက်ရပြီ။
Reply ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး January 24, 2013 - 7:50 pm မြေဇာပင်တွေပေါ့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး စစ်မီးလျှံကူးသွားမှ လူတွေကနားလည်မှာ
Reply မင်းကြီးညို January 25, 2013 - 5:02 pm စစ်ပွဲကိုကြောက်လို့၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလို့ နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားရင်တော့ ရခိုင်ဒေသက